Bitz Coin စျေး - အွန်လိုင်း BITZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Bitz Coin (BITZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Bitz Coin (BITZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Bitz Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $181 295.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Bitz Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Bitz Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Bitz CoinBITZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.182Bitz CoinBITZ သို့ ယူရိုEUR€0.154Bitz CoinBITZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.139Bitz CoinBITZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.166Bitz CoinBITZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.62Bitz CoinBITZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.15Bitz CoinBITZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.03Bitz CoinBITZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.677Bitz CoinBITZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.241Bitz CoinBITZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.254Bitz CoinBITZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.04Bitz CoinBITZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.41Bitz CoinBITZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.976Bitz CoinBITZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹13.61Bitz CoinBITZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.30.71Bitz CoinBITZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.25Bitz CoinBITZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.278Bitz CoinBITZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.65Bitz CoinBITZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.26Bitz CoinBITZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥19.44Bitz CoinBITZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩215.64Bitz CoinBITZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦70.47Bitz CoinBITZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽13.28Bitz CoinBITZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5
Bitz CoinBITZ သို့ BitcoinBTC0.00002 Bitz CoinBITZ သို့ EthereumETH0.000474 Bitz CoinBITZ သို့ LitecoinLTC0.00334 Bitz CoinBITZ သို့ DigitalCashDASH0.002 Bitz CoinBITZ သို့ MoneroXMR0.00204 Bitz CoinBITZ သို့ NxtNXT14.19 Bitz CoinBITZ သို့ Ethereum ClassicETC0.0268 Bitz CoinBITZ သို့ DogecoinDOGE52.5 Bitz CoinBITZ သို့ ZCashZEC0.00221 Bitz CoinBITZ သို့ BitsharesBTS5.6 Bitz CoinBITZ သို့ DigiByteDGB5.82 Bitz CoinBITZ သို့ RippleXRP0.646 Bitz CoinBITZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.00627 Bitz CoinBITZ သို့ PeerCoinPPC0.603 Bitz CoinBITZ သို့ CraigsCoinCRAIG82.89 Bitz CoinBITZ သို့ BitstakeXBS7.76 Bitz CoinBITZ သို့ PayCoinXPY3.18 Bitz CoinBITZ သို့ ProsperCoinPRC22.82 Bitz CoinBITZ သို့ YbCoinYBC0.0001 Bitz CoinBITZ သို့ DarkKushDANK58.38 Bitz CoinBITZ သို့ GiveCoinGIVE394.01 Bitz CoinBITZ သို့ KoboCoinKOBO41.44 Bitz CoinBITZ သို့ DarkTokenDT0.168 Bitz CoinBITZ သို့ CETUS CoinCETI525.41